कामगर्दा सातबार मध्ये कुनबार राम्रो ? ज्योतिष शास्त्रले यसो भन्छ - Halesi Khabar
कामगर्दा सातबार मध्ये कुनबार राम्रो ? ज्योतिष शास्त्रले यसो भन्छ
२ पुष २०७७, बिहीबार १८:०३ ।
हरेक मानिसले विज्ञानलाई उतिकै मान्छ । भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान जस्तै अर्को शक्तिशालि विज्ञान हो ज्योतिष विज्ञान । यसले व्यक्तिको जीवनमा जन्म बार र राशी ठूलो प्रभाव पारेको हुन्छ । हरेक व्यक्तिको जन्म बार हेरेर नै व्यक्तिको कुण्डली निर्माण गर्ने गरिन्छ । जन्मेको बार र राशीले नै ब्यक्तिको भविष्य वाणी समेत गर्ने गर्दछन् ।
ज्योतिष शास्त्र अनुसार जो कसैले व्यापार व्यवसाय र नोकरी तथा केही नयाकाम गर्नको लागि पनि आफु जन्मेको बारमा कुन दिन गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने जिज्ञासा राख्दछ । यहि जिज्ञासालाई केही राहात दिन सात बार मध्ये कुन दिन के कामको सुरु गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने बारेमा हो यो जानकारी ः
१, आईतबारः आइतबारको दिन गीत ,बाद्य वादन, राजसेवा, गाइगोरु, कि न बे च गर्ने, हवन गर्ने मन्त्र उपदेश लिने, औषधी निर्माण गर्ने, शास्त्र , सुन, तामा, उनी, बस्त्र जस्ता सामाग्रीको किनबेच गर्ने, रातो वस्तुको कारोबार गर्ने जस्ता कार्य गर्नु धेरै शुभ रहनेछ ।
२, सोमबारः सोमबारको दिनलाई भगवान शिवको प्रिय दिनको रुपमा लिने गरिन्छ । सोमबारको दिन गाई, भैसी, घोडा, फुल, घाँस, वृक्ष्य, मोती, चाँदी, आदिको किनबेच गर्नु महिलाहरुको संगत गर्नु निकै राम्रो मानिन्छ ।
३, मंगलबारः मंगलबारको दिन भगवान गणेशको पूजा आरधना गर्ने दिन । यो दिन गणेश भगवानका पूजाआज गरे जस्तो सुकै कामको सुरुवात गरेपनि सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
४, बुधबारः यो दिनलाई पुण्य आर्जन गर्ने दिनको रुपमा लिइन्छ । बुधबारको दिन वस्तु कला, चित्रकला र अध्ययनमा सोचेभन्दा धेरै सफलता मिल्नेछ ।
५, बिहिबारः यो दिन धार्मीक कार्य गर्नु राम्रो मानिन्छ । यो दिन मन्दिर निर्माण, मन्त्र जप, नवग्रह पुजा गर्दा तपाईको कार्य निर्धारित समयमा नै सम्पन्न हुन्छ ।
६, शुक्रबारः यस दिन गायण, मणी, रत्न, हिरा, सुगन्ध, बस्त्र, उत्साह, अलंकार, बाणिज्य, व्यापार, गाई वस्तु मिनबेच गर्नु, द्रव्य भण्डारण गर्नु धन सञ्चय गर्नु, कृषि कार्य सुरुवात गर्नु शुभ मानिन्छ ।
७, शनिबारः शनिबार कुनै पनि नयाँ कार्य सुरु गर्दा शनि देवको ठूलो प्रभाव पर्ने धार्मिक शास्त्रमा उल्लेख गरएको छ । झु टो बोल्नु , ठगि गर्नु , क प ट गर्नु , गृह प्रवेश, स्थिर कार्य , नोकरी गर्नु , कलकारखानाको उद्घाटन, फ ला म आदिको कार्य गर्नु निकै शुभ मानिन्छ । एजेन्सीको सहयोगमा
खोटाङमा थप अर्को मिडिया
युट्युबको कमाई साँढे ३ अर्ब, नौ बर्षका बालकले कमाए यसरी
जन्तेढुङ्गा र बराहपोखरीको १४ विद्यालयमा पुमा भाषाको पढाइ
कोरोनाका कारण नौँ महिनादेखि बन्द विद्यालय धमाधम खुलाइँदै
जडान गरेको वर्ष दिन नपुग्दै बल्न छाड्यो नगरपालिकाको सडक सौर्यबत्ती
केन्द्रीय विद्युत जडानपछि चौबीसै घण्टा टेलिफोन
१. प्रधानमन्त्री ओलीको ¥याली पञ्च¥यालीभन्दा फरक हुन्न : अध्यक्ष प्रचण्ड
२. विश्वमै ओली जस्तो झुटो बोल्ने र बेइमान व्यक्ति छैन : अध्यक्ष नेपाल
३. प्रधानमन्त्री ओलीद्धारा देशकै दोस्रो लामो राप्ती पुल उद्घाटन, लालमटियामा जनसभालाई सम्बोधन
४. प्रचण्ड–माधव समूहद्धारा तेस्रो चरणको विरोध कार्यक्रम घोषणा
५. अदालतको फैसला ढिलो भए चुनाव पछाडि सर्न सक्छ : गृहमन्त्री थापा
६. ओली समूहको जनसभा काउण्टर जवाफ नभइ स्थिरताका लागि हो : ईश्वर पोखरेल